HTC Imagine အသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည် Androidsis
ရလဒ်များသို့မဟုတ်ရောင်းအားများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာမရှိခဲ့သော်လည်း HTC သည်မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုမချသေးပါ။ ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဖုန်းများကိုဈေးကွက်တွင်ဆက်လက်ရောင်းချနေသည်။ သူတို့က 2017 ခုနှစ်တွင်လုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုခုသူတို့စီစဉ်ထားအတော်လေးအနည်းငယ်ရှိသည်ရှိရာယခုနှစ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှာကြသည်။ စျေးကွက်တွင်ကုမ္ပဏီမှဖြန့်ချိမည့်ဖုန်းများ၏တစ်ခုဖြစ်သည် HTC Imagine.
ယခုအချိန်အထိကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းဘာမျှမသိသေးပါ။ ဒါပေမယ့်အီးယခုတနင်္ဂနွေတွင်ဤ HTC Imagine ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များသည်ပေါက်ကြားပြီးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်တယ်။
ဖုန်းကိုAprilပြီလတွင်ဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်မျှော်လင့်ရသည်။ ဒီတော့စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ဤကိစ္စတွင်အလွန်တိုတောင်းသည်။ ထို့အပြင် device name သည် codename တစ်ခုဟုထင်ရသည်။ တကယ်တော့၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကြောင့် HTC U12 ၏ညီငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုကောလာဟလများစွာထွက်ပေါ်နေသည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့၎င်းကို HTC Imagine ဟုခေါ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကတည်းက high-end ဖုန်းကိုရင်ဆိုင်နေရသည် Snapdragon 845 ကို Processor အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်အာမခံစွမ်းအားအပြင်အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလည်းရှိတယ်။ ဒါဟာအစပါလိမ့်မယ် RAM ကို6GB အထိ နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏအထိ ၂၅၆ GB အထိရှိသည်။
ဒီ HTC Imagine မှာပါဝင်မှာပါ ၅.၃ လက်မ QHD မျက်နှာပြင်။ ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာမူနောက်ဘက်တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြစ်လိမ့်မည် dual-sensor ကို Sony 12 + 16 MP ဖြင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရှေ့ကင်မရာမှာ 8 MP ကင်မရာတစ်ခုပါရှိပါတယ်။
ဘက်ထရီသည်၎င်းတွင်ရှိလိမ့်မည် 3.420 mAh ဘက်ထရီ။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောမျက်နှာများသော့ဖွင့်နိုင်သည် IP68 လက်မှတ် (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်) ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအကွာအဝေး၏စစ်မှန်တဲ့ထိပ်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ operating system တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ရပါလိမ့်မည် Android 8.0 Oreo နှင့် Project Treble အထောက်အပံ့ရှိသည်.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် HTC Imagine သည်Aprilပြီလတွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားသည်။ ၎င်း၏တိကျတဲ့ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းပေမယ့် ဖုန်း၏ပုံရိပ်များနှင့်မည်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်စတင်မည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့မသိသေးပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC Imagine သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်